Darpan Nepal – मुख मैथुन सेक्सको स्टार्टिङ प्वाइन्ट ? ~भूमिका श्रेष्ठ
मुख मैथुन सेक्सको स्टार्टिङ प्वाइन्ट ? ~भूमिका श्रेष्ठ
नैकापका कुमार श्रेष्ठ र उनकी जीवन संगिनी नुमाको कान्छो छोराको रुपमा २७ बर्षअघि कैलाश श्रेष्ठ जन्मिए । तर, अहिले उनी तेस्रोलिङ्गी भुमिका श्रेष्ठका रुपमा समाजमा स्थापित छिन । पुरुष र महिलालाई मात्रै सामाजिक मान्यता दिने समयमा उनलाई आफु तेस्रोलिङ्गी भएको खुलाउन बाहिरमात्रै होईन, घरमै पनि सास्ती भयो । घरपरिवार, छरछिमेक, स्कुल सबैतिर उनलाई छोरो मान्छेका रुपमा चिन्थे तर, उनकोे स्वभाव र आनिबानी भने केटीको जस्तो थियो ।छोराको बिहे गरेपछि बानी सुध्रिने भन्दै परिवारले उनको बिहे गरिदिन केटी पनि खोजे । तर, उनले बिहे गर्न मानेनन् । ‘बिहे गर्ने भनेर मेरा लागि घरबाट दुई–तीनवटा केटी पनि खोजे ।
मलाई देखाए पनि । तर, मैले बिहे गर्न मानिनँ ।म आफैँ केटी हँु, अनि केटीसँगै किन बिहे गर्नु भनेर अस्वीकार गरे’, भावनाले मिरर न्यूजसितको अन्तरंग कुराकानीमा भनिन् ।ब्लु डायमण्ड सोसाईटीको सम्पर्कमा आएपछि कैलाशको नयाँ न्वारन भयो, भावना श्रेष्ठ । उनी अहिलले सोसाईटीको मानवअधिकार विभाग प्रमुख पनि हुन । आफु र आफुजस्तै साथीहरुलाई छक्का, हिंजडा, नपुंशक भनेर समाजमा होच्याइएको उनले कति सुनिन, झेलिन गनिसाध्य छैन ।त्यसैले उनी तेस्रोलिङ्गीहरुको हकहीतकालागि लडिरहेकी छिन । उनी अहिले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनीधि समेत छिन ।हेर्दापनि भावना सुन्दरी छिन । त्यसैले केटी भन्ठानेर प्रेम प्रस्ताव राख्नेहरु पनि थुप्रै भेटिए उनलाई । दुई÷तीन पटक त गम्भिर प्रेममा पनि परिन । तरपनि बिहे हुन सकेन । ‘केटाहरू दुलही बनाएर, बुहारी र पत्नी बनाएर घरमा भित्र्याउन तयार हुने तर, उनीहरूको परिवारले बच्चा खोज्ने । मसँग बच्चा पाउने क्षमता नै नहुने । मैले दिनै नसक्ने कुरा उनीहरूलाई कसरी दिन सक्थेँ र ? त्यसपछि लभ टुट्ने’, प्रेम असफल हुनुका कारण उनी आफै सुनाउँछिन । भावनाको जिवनकथा उनकै शब्दमा बुबा (कुमार श्रेष्ठ) र आमा (नुमा श्रेष्ठ)को कान्छो छोराका रूपमा २७ वर्षअघि म जन्मिएँ । मभन्दा माथि एक दिदी र एक दाजु हुनुहुन्छ ।उहाँहरूको विवाह भइसकेको छ ।
अहिले नयाँ नैकाप–१ काठमाडौंमा आमा र दाजु–भाउजूसँगै बस्छु । समाजमा अहिले भूमिकाका नामले चिनिए पनि मेरो परिवारले दिएको नाम कैलाश हो ।मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिए पनि मेरो बाल्यकाल सुखमय नै रह्यो । नैकापकै ब्राइड फिउचर सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलमा पढ्थेँ । बुबाको मृत्युपछि घरमा आर्थिक समस्या देखिन थाले । पाँच कक्षादेखि म पनि बोर्डिङबाट सरकारी स्कुलमा सारिएँ ।छोरी मान्छेको अनुभूति हुन थाल्यो छोराका रूपमा जन्मिएँ, त्यसैले परिवार र आफन्तहरूले निकै खुसी मनाएका थिए । तर, त्यो खुसी खुसीमै सीमित रह्यो । हुर्कंदै जाँदा मेरो व्यवहार, अनुभूति र आनिबानीमा फरकपन देखिन थाल्यो । ममा छोरी मान्छेको स्वभाव देखिन थाल्यो । मेरो व्यवहार देखेर सबै छक्क पर्थे । तर, मलाई भने केही अनौठो लाग्दैनथ्यो ।चार–पाँच वर्षकै उमेरदेखि घरमा भाँडा माझ्ने, लुगा धुनेलगायतका काममा सहयोग गर्थेँ । दिदीको ड्रेस लगाउने, लिपिस्टिक लगाउने रहर लाग्थ्यो र त्यस्तै गर्थेँ पनि । घरमा भने ‘अहिले बच्चै छ, ठूलो भएपछि आफैँ त्यस्तो सोच हराउँछ’ भन्ने ठान्थे । परिवारले उमेर बढ्दै जाँदा मेरो व्यवहार केटा मान्छेकै जस्तो हुने आशा गरेको थियो । तर, मेरो व्यवहारमा परिवर्तन आएन । बरु, ममा केटीहरूको हाउभाउ नै बढी झल्किन थाल्यो ।मलाई ‘म अरू केटाभन्दा फरक छु’ भन्ने लाग्थ्यो । ११ वर्षको हँुदा मैले त्यस्तो महसुस गरे ।
केटा मान्छेका रूपमा जन्मिएकाले समाजले मलाई पुरुषकै व्यवहार गथ्र्यो । तर, मलाई कहिले पनि ‘केटा मान्छे हँु’ भन्ने महसुस नै हुँदैनथ्यो । ‘केटी हुँ’ भन्ने लाग्थ्यो । स्कुलमा, बाटो हिँड्दा साथीहरूले ‘छक्का, हिँजडा, नपुंसक’ भनेर जिस्काउँथे । तर, म वास्ता नै गर्दैनथेँ । स्कुलमा पनि केटीकै ड्रेस लगाएर नाच्थेँ । केटाहरूसँग कुरै मिल्दैनथ्यो । केटीहरूसँग नै बढी मिल्थे ।केटाहरू नै मन पर्थेटिनएजमा पुगेपछि ममा जुन परिवर्तन आउनुपथ्र्यो, त्यो आएन । विपरीत लिङ्गप्रति आकर्षित हुनुपर्नेमा मलाई केटाहरू मन पर्थे । सरहरू ‘व्यवहार परिवर्तन गर, केटा भएर पनि के केटीजस्तो भएको ? केटाजस्तो भएर बाँच्न सिक’ भन्नुहुन्थ्यो । म ड्रेसअप त केटाकै गर्थेँ, तर केटीको जसरी गाजल, पाउडर लगाउँथे ।जन्मिँदा जुन रूपमा जन्मियो व्यवहारमा पनि त्यस्तै गर्नुपर्छ भनेर सोच्दो रहेछ हाम्रो समाजले । तर, मान्छेको मन र अनुभूति त त्यसरी हिँड्न त सक्दैन नि ! शारीरिक बनावट केटाको भए पनि मन, अनुभूति र दिमाग केटीको जस्तो भएपछि त त्यो केटी नै हो नि !मलाई समाजले, साथीहरूले सधैँ नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्थे । त्यसैले म कसैसँग पनि कुरा गर्न सक्दैनथेँ । केटाका रूपमा जन्मिएको मैले ‘केटा नै मन पर्छ’ भनेर कसलाई र कसरी भन्ने ? हामी साथीसाथीबीच कुरा हुन्थ्यो, ‘यो केटा कस्तो ह्यान्डसम छ, यो केटा मन पर्छ’ भनेर । तर, त्यो केटाको अगाडि गएर भन्न सक्दैनथेँ ।
आफूले इच्छाएको र चाहेको कुरा पनि म कसैसँग भन्न सक्दैनथेँ ।समाजले ‘केटा भएर केटाको जस्तै भएर हिँड्’ भन्थ्यो । तर, मैले कसरी सक्नु ? मेरो मन भित्रदेखि आएको, अनुभूति गरेको कुरा कसरी परिवर्तन गर्न सक्थेँ र ! परिवर्तन गर्न सक्ने भए त्यति धेरै मानसिक यातना सहीसही किन बस्थेँ होला ? यसरी बाँच्ने मलाई पनि त रहर छैन नि ।केही मान्छेले ‘संगतले पनि हो’ भन्थे । संगतले त्यस्तो परिवर्तन आउने भए त ममा पनि आउँथ्यो होला नि ! कति पटक म केटाजस्तै भएर हिँड्न खोजेँ, तर सकिनँ । मानसिक तनाव हुँदा म कोठामा चुुकुल लगाएर एक्लै रोएर बस्थेँ ।केटी हुँ भन्ने महसुस भयोम ११ वर्षको भएपछि मैले ‘म केटी हुँ’ भन्ने महसुस गर्न थालेँ । मेरो व्यवहार पनि छोरी मान्छेको जस्तो हुन्थ्यो । ‘म किन यस्तो गर्छु, किन मलाई यस्तो भएको होला’ भन्ने लाग्थ्यो । आफ्नो व्यवहार देखेर आफैँलाई अचम्म लाग्थ्यो । म पूरै ‘कन्फ्युज’ थिएँ । छोरी मान्छेले गर्ने काम मात्रै मलाई गर्न मन पथ्र्यो ।हाम्रो नेवार समुदायमा छोरीले गुफा बस्ने चलन छ । गुफा बसेको वेला छोरा मान्छेले हेर्नुहँुदैन । तर, म जान्थेँ । मेरो दिदी गुफा बसेको वेला म गएँ । ‘म जान्छु’ भनेर घरमा रोएँ, झगडा गरेँ । धेरै गरेपछि ‘सानो छ, केही हुँदैन’ भनेर जान दिनुभयो ।मम्मीले ‘अहिले बच्चै छ, ठूलो हुन्छ, जिम्मेवारी सम्हालेपछि आफैँ सुधार्छ बानी’ भन्नुहुन्थ्यो ।तर, ठूलो हुँदै जाँदा पनि मेरो व्यवहारमा परिवर्तन आएन । म त झन् उग्र हुन थालेँ । फेसन पनि त्यस्तै गर्न थालेँ । फूल मेकअप गर्थे । त्यसरी नै स्कुल पनि जान्थेँ । स्कुलमा पनि केटी साथीसँग बढी मिल्थेँ ।कक्षामा पनि केटीकै बेन्चमा बस्थेँ । केटाहरू त मेरो साथी नै थिएनन् भन्दा पनि हुन्छ । ‘केटा भएर पनि केटीहरूसँग मिलेको’ भनेर केटाहरूले जिस्क्याउँथे ।
उनीहरूले मलाई नराम्रो व्यवहार गर्थे । केटीलाई सजिलै छुन सक्दैनथे । अनि, मलाई ‘यो केटा हो, जे गरे पनि हुन्छ भनेर छुने, शरीर चलाउने र जिस्क्याउने गर्थे । मलाई भने एकदमै नमजा लाग्थ्यो ।स्कुलको ट्वाइलेट दुईपल्ट मात्रै प्रयोग गरेँत्यो स्कुल पढ्दाको चार वर्षको अवधिमा मैले मुस्किलले एक वा दुईपटक मात्रै स्कुलको ट्वाइलेट प्रयोग गरेको छु । केटीको ट्वाइलेटमा जान मिल्दैन्थ्यो । केटाकोमा जानै सक्दैनथेँ, साथीहरूले जिस्क्याएर हैरान बनाउँथे । कोही नभएको मौका पारेर, सबैजना कक्षामा भएको वेला एकपटक केटाको ट्वाइलेट प्रयोग गरेँ ।साथीहरूको बानीले गर्दा म स्कुलको ट्वाइलेट प्रयोग गर्नै सक्दैनथेँ । म पढ्ने स्कुल हाम्रो घरनजिकै थियो । सुटुक्क घर आएर ट्वाइलेट जान्थेँ । स्कुलमा पिसाब लाग्छ भनेर पानी पनि नखाएर बस्थेँ ।स्कुलमा केही सर र विद्यार्थी साथीले मलाई ‘छक्का’, ‘हिँजडा’ जस्ता शब्दहरू भनेर निकै ‘ह्यारेस’ गर्ने काम पनि गरे । म्याडमले त केही भन्न सक्नुहुन्थेन । बरु, गाह्रो प्रश्न सोध्नुहुन्थ्यो । र, नजानेपछि अलि होच्याएर भन्नुहुन्थ्यो– ‘तलाई केटा भएर केटीको जस्तो नक्कल पारेर हिँड्न त आउँछ, पढ्न आउँदैन ?’ स्कुलमा मलाई कसैले पनि सपोर्ट गर्दैनथे ।स्कुल पढ्न दिइएनजब म ९ बाट १० कक्षामा गएँ, त्यतिवेला मलाई ‘व्यवहार सुधारेर आउने भए पढ्न पाउने, नत्र पढ्ने ठाउँ छैन’ भनियो । यो ०६२ सालको कुरा हो । त्यसपछि मलाई स्कुल जानै मन लागेन ।
घरमा बोल्न सक्ने मान्छे कोही पनि थिएन । त्यसैले परिवारले पनि केही भन्न सकेन ।सकेसम्म मैले एसएलसी पास गनुपर्छ भन्ने सोचाइ मम्मीको थियो । मेरो पनि त्यस्तै सोच थियो । ‘जसरी भए पनि एसएलसी पास गर्नुपर्छ’ भन्ने सोच्थेँ । तर, माहोल नै भएन । केही शिक्षक र केही साथीका कारण मैले स्कुल नै छाड्नुप¥यो । एसएलसीसमेत पूरा गर्न पाइनँ । स्कुल जानसमेत मलाई अप्ठेरो पारे ।बिहे गर्न घरबाट केटी पनि खोजेसमाजमा सबैले छोरा भनेर चिन्थे । तर, मैले छोरीको जस्तो व्यवहार देखाउँथेँ । त्यो देखेर केहीले मम्मीलाई कुरा सुनाउँदा रहेछन् । ‘तपाईंको छोरो के भएको त्यस्तो ?, छोरी मान्छेजस्तो गरेर आयु घटाइरहेको छ’ मम्मीलाई यस्तायस्तै कुरा सुनाउने गर्थे । त्यसले मम्मीलाई टेन्सन बनाउँथ्यो । अरू वेला मलाई घरबाट कहिल्यै नराम्रो व्यवहार भएन ।छोराछोरीको उमेर बढ्दै गएपछि अभिभावकलाई खुसीसँगै तनाव पनि थपिन्छन् । जिम्मेवारी पनि बढ्दै जान्छन् । छोराछोरीको विवाहको चिन्ता पनि हुन्छ । मलाई पनि घरबाट विवाह गर्न दबाब आउन थाल्यो । मम्मीले ‘तिमी छोरा हो, बिहे गनुपर्छ, अब उमेर पनि भइसक्यो’ भनिरहनुहुन्थ्यो ।बिहे गर्ने भनेर मेरा लागि दुई–तीनवटा केटी पनि खोज्नुभयो । मलाई पनि देखाउनुभयो । तर, मैले बिहे गर्न मानिनँ । ‘म आफैँ केटी हँु, अनि केटीसँगै किन बिहे गर्नु’ भनेर अस्वीकार गर्थेँ । म के हुँ भन्ने मलाई थाहा थियो नि ।
थाहा पाउँदापाउँदै बिहे गरेर अर्को केटीको लाइफ किन बर्बाद गर्नुजस्तो लाग्थ्यो । त्यसैले मैले घरबाट केटी खोज्दा पनि पनि बिहे गरिनँ ।परिवार, साथीभाइ र समाजले मलाई ‘छोरा मान्छे’ भन्दा मलाई नमजा लाग्थ्यो । कतिवेला त ‘यो संसारमा म मात्रै यस्तो सोच्ने हुँ कि’ जस्तो लागेर साह्रै दिक्क लाग्थ्यो । त्यस्तै समयमा मैले नेपाल टेलिभिजनमा ‘संघर्ष’ कार्यक्रम हेरेँ आरती चटौत दिदीको । इन्डियाको समलिङ्गीको बारेमा कार्यक्रम बनाइएको थियो । त्यो देखेर मलाई अचम्म लाग्यो । ‘अबुई ! यस्ता मान्छे पनि हुन्छन् र’ भनेर मनमनै डराएँ पनि त्यतिवेला । अर्कै ग्रहका मान्छेजस्ता लागे समलिङ्गी त्यतिवेला मलाई ।सोसाइटीमासन् २००४ को कुरा हो । घर जान म रत्नपार्कमा गाडी कुरिरहेको थिएँ । एकजना पिङ्की गुरुङ मेरो छेउमा आउनुभयो । नजिकै आएर मसँग कुरा गर्न थाल्नुभयो । उहाँले सुरुमा ‘घडी छ’ भनेर सोध्नुभयो । हेर्दा केटोजस्तो छ ।सुरुमा त अलि डराएँ । पछि बिस्तारै कुरा गर्न थाल्नुभयो । ‘हामी केटी भएर केटा मान्छेजस्तो बनेर बस्नुहुँदैन, यसरी कतिन्जेल लुकेर बस्ने’ भन्दै कुरा गर्नुभयो । म ट्वाँ परेर सुनिरहेँ ।म पनि तिमीजस्तै हो, एउटा संस्था छ हामीहरू जस्तै साथीहरू भएको, म तिमीलाई देखाउँछु जान्छौ’ भनेर उहाँले सोध्नुभयो । मैले पनि ‘हुन्छ’ भने । उहाँसँगै म अफिस हेर्न गएँ । त्यो अफिस ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको रहेछ ।त्यहाँ मजस्तै अरूको पनि फोटोको कलेक्सन गरिएको रहेछ ।
उहाँले ती फोटा मलाई देखाउनुभयो । फोटोहरू हेरेपछि मलाई एकदमै खुसी लाग्यो । ‘म एक्लै रहेनछु, मजस्तै धेरै मान्छे रहेछन् यो संसारमा’ भन्ने थाहा भयो ।म काम गर्ने सोचले त्यो संस्थामा गएकी थिइनँ । जब त्यहाँ फोटो हेरेँ, मजस्तै अरू मान्छेलाई पनि भेटेँ, त्यसपछि म अफिसमा आउन थालेँ । विस्तारै–विस्तारै कुराहरू पनि बुझ्न थालेँ । त्यतिवेला समलिङ्गी भनेर भन्थेँ । समलिङ्गी त हामीलाई पो भनिँदो रहेछ भन्ने थाहा पाएँ । नेपाल टेलिभिजनमा हेरेको ‘संघर्ष’ कार्यक्रममा देखाइएको कुरा त हाम्रैबारेमा रहेछ भन्ने कुरा बल्ल थाहा पाएँ ।कुण्ठाको जीवन बाँच्थेँ हुँलामलाई सानोमा डान्स गर्न एकदम मनपथ्र्यो । स्कुलमा पनि नाच्थेँ । डान्स टिचर बन्छुजस्तो पनि लाग्थ्यो । सोसाइटीमा आएपछि ‘आफूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, आफ्नो हक–अधिकारका लागि लड्नुपर्छ’ भन्ने हिम्मत आयो । समलिङ्गी, तेस्रोलिङ्गीको बारेमा पनि थाहा पाएँ । यस्ता धेरै काुरा सिक्दै गएँ ।‘संघर्ष’ कार्यक्रम सम्झेर एकपटक पनि हाँसो लाग्यो । तेस्रोलिङ्गी, समलिङ्गी त हामीलाई पो भनेको रहेछ । सुरुसुरुमा त मेकअप गरेर बाटोमा हिँड्दा मान्छेहरू मलाई हेरेर हाँस्दा मख्ख पर्थेँ । मलाई राम्री भएको देखेर हाँसेकोजस्तो लाग्थ्यो । हिँजडा, छक्का र नंपुसक भन्दा पनि केही भन्दैनथेँ ।किन भनेको भन्ने नै थाहा थिएन । छक्का, हिँजडा भनेको हामी होइन । लिङ्ग छेदन गरेर केटी मान्छे बन्नेलाई भन्छन् त्यस्तो ।
त्यो छुट्टै समुदाय हो । त्यस्ता समुदायको बसोबास भारतमा छ । मान्छेहरूले नबुझेर हामीलाई नै त्यस्तो भन्छन् ।सायद यो संस्था (ब्लु डायमन्ड सोसाइटी)मा नआएको भए म एउटा कुण्ठाको जीवन बाँचिरहेको हुन्थेँ होला । सोसाइटीमा आइसकेपछि मेरो जीवन नै पूर्ण रूपले फेरियो । आत्मसम्मानको जीवन बाँच्न सिकेँ, बोल्न सिकेँ, नयाँ–नयाँ कुराहरू सिकेँ । आफ्नो पहिचनामा आएँ ।म केटी हुँ । केटी नै थिएँ । केटी नै रहनेछु । त्यसपछि मलाई ड्रेस चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । सुरु–सुरुमा त केटीको कपडा लगाएर हिँड्ने आँट नै आएन । बिस्तारै–बिस्तारै लेडिज कपडा लगाउन सुरु गरेँ । पछि बानी परेपछि भने अप्ठेरो लागेन ।‘मन पराउँछु’ भन्ने धेरै भेटिएकेटीको ड्रेसअप र मेकअप गरेर हिँड्न थालेपछि त धेरै मान्छेहरू झुक्किए । हेर्नमा पनि राम्री नै छु । धेरैले पे्रम प्रस्ताव राखे । कतिपयले केटी भनेर भुक्किएर प्रेम प्रस्ताव गर्थे, कतिले थाहा पाएरै । त्यस्तो प्रस्ताव राख्ने कतिजनालाई त मैले ‘म केटा मान्छे हो’ भनेर स्पष्ट बताइदिएँ । त्यसपछि उनीहरू आफ्नो बाटो लाग्थे । कतिपय केटा हो भनेर अचम्म पर्दै तर्सिन्थे । कतिले भने थाहा पाएर नै मलाई प्रेम गर्थे ।‘तिमीलाई मन पराउँछु’ भन्नेहरू धेरै भेटिए, आए । म के हुँ भन्ने थाहा पाएर मन पराउने पनि थिए, पछि थाहा पाएर भाग्नेहरू पनि थिए । र, मेरो वास्तविकता थाहा पाइसकेपछि दया देखाउने पनि भेटाए । कतिले ‘मिस युज’को रूपमा पनि लिन खोजे । तर, मैले वास्तै गरिनँ ।टिनएजमा पनि मेरो केटाहरूप्रति नै आकर्षण रहन्थ्यो । उनीहरूले भने साथी सम्झिन्थे । मैले भने ‘ब्वायफ्रेन्ड’ सम्झन्थे । तर पनि म केटा नै भएकाले मन पराए पनि भन्न सक्दैनथे । मेरो मनको कुरा कसैले बुझ्दैनथ्यो । अब भने वास्ता लाग्दैन ।
पहिलो प्रेम व्यक्त गर्नै सकिनँ स्कुल पढ्दाखेरी नै मैले एकजना केटालाई खुब मन पराउँथेँ । ऊ मभन्दा एक क्लास सिनियर थियो । यति धेरै मन पराउँथेँ कि ऊ स्कुल आउने वेला घन्टौँ बाटोमा कुर्थेँ, ऊ आएपछि पछिपछि हिँड्थे, कहिलेकाहीँ टाढाबाट उसलाई हेर्थेँ ।तर, ‘म तँलाई मन पराउँछु’, ‘ब्वायफ्रेन्ड बनाउँछु’, ‘धेरै माया गर्छु’ भनेर कहिल्यै भन्न सकिनँ । मेरो घरकोे बाटो भएर नै ऊ स्कुल आउँथ्यो, म बाटो हेरेर बस्थेँ । जब ऊ आउँथ्यो अनि, उसको पछिपछि स्कुल जान्थेँ ।यस्तो क्रम धेरै चल्यो । पछि मैले नाम नखुलाएर एउटा बच्चाको सहयोगमा उसलाई पोस्टकार्ड पठाएँ । तीनपटक यसरी पोस्टकार्ड पठाएँ । तर, पछि कसले दिएको हो नाम नबताए लिन्न भनेर लिएन । तर, उसलाई मैले पोस्टकार्ड पठाएको हो भन्ने पछि पनि थाहा भएन उसको क्लासका साथीहरूको सहयोगमा ऊसँग चिनजान भयो । पछि सँगै चिया खानेसम्म भयौँ । झन् धरै माया लागेर आउँथ्यो । तर पनि मैले उसका अगाडि आफ्नो प्रेम कहिल्यै प्रकट गर्न सकिनँ । उसले अरूबाटै थाहा पाएको भए थाहा भएन । त्यसपछि पनि तीन–चारपटक लभमा परेँ, तर धेरै टिकेन । एउटा काभ्रेको केटासित लामो समय अफेयर चल्यो । उसको घरमा पनि आउजाउ गर्ने गर्थेँ । धेरै समय हामी सँगै बिताउँथ्यौँ । तर, पछि उसले पनि अर्कै केटीसित बिहे ग¥यो । सायद उसको घरका मान्छेले ‘बच्चा चाहिन्छ’ भने । म बच्चा दिन सक्दैनथे ।
यसबीचमा मलाई थुप्रै प्रेम–प्रस्ताव पनि आए । हेर्दा पनि म राम्री नै छु । मलाई केटी नै हो भनेर ठान्छन् पनि होला । त्यसरी प्रस्ताव राख्नेलाई मैले ‘म त यस्तो पो हो’ भनेर बताएपछि कति भागेर गए, कतिले दयाको रूपमा हेरे, कतिले ‘तिमी यस्तो भएर पनि यति राम्रो काम गरिरहेछौ’ भनेर सहानुभूति दिए । तीनपटक ‘रियल लभ’मा परेँप्रेम आत्मानुभूति हो । आफ्नो मनको कुरा अरूलाई व्यक्त गर्ने एउटा प्रक्रिया पनि हो यो । केयरिङ एन्ड सेयरिङ नै माया हो । आफ्नो अलिक बढी स्पेसल मान्छेसँग मात्रै हुन्छ यो । म पनि लाइफमा तीनपटक रियल लभमा परेँ । तर, मेरो लभ सक्सेस हुन भने सकेन ।जब म केटाको रूपबाट केटीको रूपमा परिवर्तन भएँ, त्यसपछि तीनजना पुरुषसँग मेरो रियल लभ चल्यो । उनीहरूले पनि मलाई साँचो माया नै गरे । हामीबीच सेक्सयुल रिलेसनसिप पनि भयो । ती तीनैजना अहिले मेरो टचमा छैनन् । उनीहरू राम्रो परिवारको राम्रो लाइफमा बाँचिरहेका मान्छे हुन् । त्यसैले म उनीहरूको नाम सार्वजनिक गर्न चाहँदैन । मैले त्यति बोल्दा उनीहरूको जीवनमा अप्ठेरो पर्न सक्छ ।मसँग अफेयर चलेको एकजनाले मलाई थाहै नदिई अर्कै केटीसँग बिहे गरेर घरजम ग¥यो । त्यसपछि मैले त्यसलाई छाडिदिएँ । ऊसँग मेरो एक वर्षसम्म अफेयर चलेको थियो । उसले मलाई थाहै नदिएर विवाह ग¥यो । त्यसले मेरो चित्त एकदमै दुखायो । ऊ मेरो पहिलो प्रेम पनि थियो ।प्रेममा धोखा खानु कम्ता पीडादायी हुँदैन । कति पीडा हुन्छ मलाई थाहा छ । अन्य केटीलाई जस्तो दुःख र पीडा हुन्छ, मलाई पनि त्यस्तै मलाई पनि त्यस्तै भयो ।त्यो घटनापछि मैले त्यो प्रेमीलाई छाडिदिएँ । लभ पर्दा ब्वायफ्रेन्डको कन्ट्रोलमा बस्नुपर्छ । जुन सजिलो काम होइन ।
त्यति हुँदाहुँदै पनि एक वर्षसम्म उसलाई साँचो माया गरिरहेँ । अन्तिममा उसले मलाई धोखा दियो । जब कि उसलाई मेरोबारेमा सबै थाहा थियो । मसँग खुसी नै थियो ।घरबाट प्रेसर आएपछि उसले अर्को केटीसित बिहे गरेको हो । तर, मलाई थाहै नदिएर, ढाँटेर बिहे गरेपछि मेरो चित्त दुखेको हो । उसलाई घरमा एउटा समस्या परेछ । बिहे गरेपछि आमाबुबाले बच्चा चाहिन्छ भनेछन् । म बच्चा जन्माउन सक्दैनथेँ । अब उसको परिवारलाई बच्चा चाहिने । म कसरी पूरा गर्न सक्थेँ उनीहरूको त्यो इच्छा ? पहिलो प्रेम ब्रेकअप भएपछि अन्य दुईजनासँग पनि माया बस्यो । उनीहरूसितको सम्बन्ध पनि त्यस्तै भयो । सँगै मिलेर काम गर्ने, घुम्ने, एकअर्काका मनका कुरा र भावना साटासाट गथ्र्यौँ । सबै कुराहरू मिल्ने, अन्तिममा फेरि बच्चामै कुरामा अड्किने । केटाहरू दुलही बनाएर, बुहारी, पत्नी बनाएर घरमा भित्र्याउन तयार हुने तर, उनीहरूको परिवारले बच्चा खोज्ने । मसँग बच्चा पाउने क्षमता नै नहुने । मैले दिनै नसक्ने कुरा उनीहरूलाई कसरी दिन सक्थेँ र ? त्यसपछि लभ टुट्ने ।म लङलास्टिङ लभ गर्न चाहने, तर केटाहरूको डिमान्ड अर्कै । मेरो जन्म पो छोरा मान्छेका रूपमा भयो । आनिबानी, अनुभूति सबै केटीको हो नि π म र मजस्ता अरू साथीहरूको मन पनि सामान्य केटीहरूको जस्तै हुन्छ नि π यो कुरा केटाहरूले नबुझ्ने क्या ।ब्वायफ्रेन्डको कन्ट्रोलमा बस्न गाह्रोकुनै पनि केटी प्रेममा हुँदा आफ्नो ब्वायफ्रेन्डको कन्ट्रोलमा बस्नुपर्ने हुन्छ । म पनि बसेँ । साह्रै गाह्रो हुन्छ ब्वायफ्रेन्डको कन्ट्रोलमा बस्न । तर, लभमा हुँदा त ब्वायफ्रेन्ड नै मेरो सबैथोक हो भन्ने लाग्छ नि ।
त्यसैले केटीहरू आफ्ना केही इच्छा, चाहना मारेर भए पनि ब्वायफ्रेन्डको कन्ट्रोलमा बस्छन् ।म पनि एक वर्ष पूरै एउटा ब्वायफ्रेन्डको कन्ट्रेलमा बसेँ । गाह्रो रहेछ त्यसरी बस्न । प्रेमको मामिलामा केटीहरू इमानदार हुन्छन् । हामी त लङलास्टिङ लभ गर्न चाहन्छौँ । तर, पुरुषहरू इमानदार हुँदैनन्, हामीले चाहेजस्तो उनीहरू चाहँदैनन् । हामीसँग पनि लभ गरिरहने, उता अर्की केटीसँग पनि रिलेसन राखिरहने ।आप्mनो ब्वायफ्रेन्डले अर्कै केटीसँग रिलेसन राखेको कुनै गर्लपे्रmन्डले टुलुटुलु हेर्न सक्छे र ? मलाई पनि ईष्र्या लाग्थ्यो । मैले मेरो प्रेमलाई लामो समयसम्म टिकाउन खोज्थेँ, तर उनीहरू सक्दैनथे । उनीहरूको व्यवहारले पनि हाम्रो प्रेमलाई दीर्घकालीन हुन दिँदैनथ्यो ।अहिले त मेरो ब्वायफ्रेन्ड छैन । र, बनाउँदिनँ पनि । नटिक्ने माया किन गर्नु ? पहिले–पहिले त एकदमै पीडा हुन्थ्यो । तर, अब त सबै सामान्य लाग्छ । हामी कसैको बुहारी भएर बस्न सक्दैनौँ, बच्चा जन्माउन सक्दैनौँ । त्यो वास्तविकता मैले बुझिसकेकी छु । हाम्रो माया बढीमा दुई–तीन वर्षका लागि मात्रै हुन्छ । त्यस्तो माया गरेर किन समय खेर फाल्नुजस्तो लाग्छ अहिले ।बाटोमा बस्नु बाध्यता होयौन व्यवसायमा लाग्ने तेस्रोलिङ्गी मात्रै होइन, अरू केटीहरू पनि छन् ।
उनीहरूलाई जाने ठाउँहरू पनि प्रशस्त छन् । बार, डिस्को, नाइट क्लब, गेस्टहाउस, मसाज पार्लर जतासुकै पनि जान्छन् । तर, तेस्रोलिङ्गीहरू कतै जान पाउँदैनन् । गयो कि गेटबाटै निकालिहाल्छन् । अनि, कहाँ जाने त ? सडकमा त बाध्यताले बस्नुपरेको हो ।सडकमा भेटिने सबै तेस्रोलिङ्गी, समलिङ्गी यौन व्यवसायका लागि मात्रै ती ठाउँमा जाने होइनन् । तेस्रोलिङ्गी, समलिङ्गी भन्नेबित्तिकै हाम्रो समाजले छाडा, उच्छृङ्खल सोच्छ । त्यस्तो होइन । हाम्रो पनि त इज्जत छ । समाज छ, घरपरिवार छ । सम्मानजनक जीवन बाँच्न हामी पनि चाहन्छौँ नि । तेस्रोलिङ्गीले बाँच्नका लागि यौन व्यवसाय गरेका हुन् ।तर, मलाई व्यक्तिगत रूपमा भने त्यस्तो समस्या कहिल्यै आएन । घरपरिवारले मलाई धेरै सपोर्ट गरेको छ । राति ठमेल म पनि नगएको होइन । तर, यौन सन्तुष्टिका लागि होइन । साथीहरूसँग रमाइलो हेर्नका लागि गएको थिएँ । यसको अर्थ म चोखो छु भन्ने चाहिँ होइन ।हाम्रो समुदायका मात्रै छौँ र यौन क्रियाकलापमा लाग्ने ? अरू केटी–केटा पनि त छन् नि । अनि, आरोप हामीलाई मात्रै किन ? कसैलाई रहर हुँदैन त्यस्तो क्रियाकलापमा लाग्ने । बाध्यताले हो । तेस्रोलिङ्गी, समलिङ्गी भन्नेबित्तिकै सबैले घृणाको दृष्टिले हेर्छन् । बाँच्ने अरू विकल्प पनि त छैन नि ।अनि, के गर्ने ? कतिपय साथीहरू घरबाट निकालिएका छन् । काम खोजेर सुरु गरेपछि हाकिमले यस्तो रहेछ भन्ने थाहा पाउँछ र, त्यहीँ यौन शोषण गरिन्छ ।
सँगसँगै कामबाट पनि निकालिन्छन् । यस्तोमा बाध्य भएर बाँच्नका लागि भए पनि यौन व्यवसाय अपनाएका हुन् ।नौ–दश वर्षकै उमेरमा सेक्समेरो विचारमा सेक्स मानवीय आवश्यकता हो । जसले पनि गर्छ । यसको अर्थ जहाँ पायो त्यहीँ गर्नुपर्छ भन्ने होइन । जोसित लगाव हुन्छ, उसित दिमाग र मुटु पनि जोडिन्छ अनि, शारीरिक सम्बन्ध हुन्छ । तनाव घटाउन पनि सेक्स महŒवपूर्ण हुन्छ ।आत्मसन्तुष्टि पनि हो सेक्स । सेक्स्युअल डिजायर सबैलाई आउँछ । कसैले खुलेर बोल्छ, कोही बोल्दैन । हामीलाई पनि आउँछ । यो नौलो कुरा होइन । सेक्सयुल डिजायर आयो भन्दैमा सेक्स नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । कसरी पूरा गर्ने भन्ने आफूमा भरपर्ने कुरा हो । आफूलाई मनपर्ने मान्छेसँग कुरा गरेर पनि त्यो पूरा गर्न सकिन्छ ।मैले १०–११ वर्षकै उमेरमा शारीरिक सम्बन्ध राखेँ । मसँगै स्कुलमा पढ्ने साथीसित पहिलोपटक सेक्स्युअल रिलेसन बन्यो । उसकै घरमा भएको थियो । हामी दुवैले यो कुरा अति गोप्य राख्यौँ । ऊसित लभ परेर वा मैले उसलाई मन पराएर भने त्यसो भएको होइन । धेरैपटक ऊसँग सम्बन्ध राखियो । स्कुल पढ्दा नै अरू दुई–तीनजनासित पनि मेरो सम्बन्ध बन्यो । एकजना मेरो घरमै आउँथ्यो । हामी सँगै बस्थ्यौँ । दुवै केटा मान्छे भएकाले घरमा कसैले शंका गर्ने कुरा पनि भएन ।मुख मैथुन सेक्सको स्टार्टिङ प्वाइन्ट हो । मलाई त्यो मन पर्छ । जसलाई मैले चोखो माया गरेँ उसित मैले धेरैपटक मुख मैथुन गरेकी छु ।
मुख मैथुन पनि प्राकृतिक सेक्सजस्तै हो । सबैले गर्छन् होला । तर, भन्दैनन् वा भन्न चाहँदैनन् । हामी खुलेर भन्छौँ ।मान्छेले चिन्दा गाह्रो हुने एकपटक म संस्थाकै कामको सिलसिलमा पूर्व गएकी थिएँ । नयाँ वर्ष सुरु हुने तयारीमा थियो । सायद मलाई लाग्छ सन् २०१० सकिने वेला हो । त्यतिवेला म नेपाली कांग्रेसको महासमिति सदस्य भइसकेकी थिएँ । कांग्रेसका कार्यक्रममा पनि सहभागी हुने गर्थे ।संस्थाको काम सकिएपछि हामी साथीहरू सिलगुडी घुम्न गयौँ । न्यु इयर इभ त्यतै रमाइलो गरेर मनाउने योजना बनायौँ र त्यही बस्यौँ । राति डिस्को गयौँ । वाइन खाँदै, नाच्दै रमाइलो गरिरहेका थियौँ । मलाई अलिअलि लागिसकेको थियो । वान पिस लगाएकी थिएँ, राम्री देखिएकी थिएँ ।डिस्कोमै भएको एकजना मान्छे मलाई अघिदेखि हेरिरहेको थियो । मैले पनि ‘वाच’ गरिरहेकी थिएँ । धेरैपटक आँखा जुधिरहेका थिए । डान्स गरेर फेरि मैले साथीसँगै वाइन लिएँ । गिलास हातमै थियो । त्यो मान्छे त मेरो नजिक आएर ‘जय नेपाल’ भन्यो । म त छाँगाबाट खसेजस्तै भएँ । रक्सी सबै उड्यो ।हातको गिलास अर्को साथीलाई दिएँ । नर्भस नै भएँ नि !खासमा ऊ नेपाली कांग्रेसको मान्छे रहेछ । मलाई चिन्दो रहेछ । रमाइलो गर्न गएको ठाउँमा भेटियो । त्यही भएर कति वेला यसरी सबैले चिन्ने नभइदिएको भए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । व्यक्तिगत लाइफ बिताउन खोज्दाखोज्दै पनि कतिपय वेला नमिल्दो रहेछ ।महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर कांग्रेसको राजनीतिमाविचार, सिद्धान्तका हिसाबले पहिलेदेखि नै नेपाली कांग्रेस मनपथ्र्यो । तर, पार्टीको सदस्य भने थिइनँ ।
लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको हक–अधिकार स्थापित गर्न राजनीतिक रूपले पनि लबिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले आफूलाई मन परेको पार्टी नै रोजेँ । १२औँ महाधिवेशन हुनुभन्दा चार–पाँच महिनाअगाडि मात्रै मैले कांग्रेसको सक्रिय सदस्यता पाएकी हुँ । त्यसको लगत्तै महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेँ र १२औँ महाधिवेशनमा भाग लिएँ । महाधिवेशनमा चार हजार प्रतिनिधिमध्ये म एकजना मात्रै हाम्रो समुदायको थिएँ ।हाम्रा कुराहरू संविधानमा पनि समेटियोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले संविधानसभामा पनि सहभागिता खोज्यौँ । पहिलो संविधानसभा सुनीलबाबु पन्त सभासद् हुनुहुन्थ्यो । दोस्रो संविधानसभामा कांग्रेसले समानुपातिकको सूचीमा मेरो नाम पनि राखेको थियोे । तर, मेरो नागरिकतामा कैलाश श्रेष्ठ भनेर नाम थियो । बाहिर भूमिका भनेर चिनिने । यही ‘टेक्निकल समस्या’ भनेर पछि मेरो नाम फालियो रे ।सम्मानजनक व्यवहार पाएकी छुसमाजमा चिनिँदै गएपछि मान्छेहरू मसित कुरा पनि सम्मानजनक ढंगले गर्छन् । मलाई सोझै प्रेम प्रस्ताव राख्न वा सेक्स्युअल रिलेसनको प्रस्ताव गर्न हिच्किचाउँछन्, डराउँछन् । समाजमा स्थापित केही मान्छे भने घुमाउरो ढंगले कुरा गर्छन् । ‘तिमी त कति राम्री, कसरी यति राम्री भएकी’ भनेर भन्छन् । एक–दुईजना वरिष्ठ अधिकारकर्मीले पनि यसो भन्ने गरेका छन् ।अहिले मलाई पनि पहिलेको जसरी बोल्न अप्ठेरो लाग्छ । भन्न मन भए पनि धेरै कुरा भन्न सकिन्न । धेरै सोचविचार गरेर बोल्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ समाजमा यसरी नचिनिएको भए पनि हुन्थ्योजस्तो पनि लाग्छ । (मिरर न्यूज मासिकको साउन अंकबाट),
Previous Postविभाग विस्तार गर्दै कांग्रेसको महिला भेला सम्पन्न Next Postपर्यटन व्यवसायि राजन सिम्खडाको हिँडे पुगिन्छ सार्वजनिक